Ray aman-dreny miahy ny ankohonany
“Aza manary ahy hiala eo anatrehanao; ary aza manaisotra ny Fanahinao Masina amiko. Ampodio amiko ny fifaliana amin’ny famonjenao; ary tohàny fanahy mazoto aho. Dia hampianatra ny olon-diso ny làlanao aho; ary ny mpanota hampiverenina aminao” Sal. 51:11-13
Vavaka manao ahoana re izany e! Marina tokoa fa tsy tokony hatao tsinontsinona ny mpanota ao amin’ny tokantrano, satria mijery azy ireny tahaka ny olona novidiny tamin’ny rany Andriamanitra. Ao amin’ny tokantrano tsirairay izay misy mpianakavy mbola tsy niova fo, dia andraikitr’ireo izay efa mahafantatra ny Tompo ny miasa amim-pahendrena ho amin’ny fiovam-pon’izy ireo. Hotahin’Andriamanitra tokoa ny ezaky ny ray aman-dreny rehefa miezaka ny hamonjy ny fanahin’ny ankohonany ao anatin’ny tahotra sy ny fitiavana Azy izy ireo. Miandry antsika ny Tompo Jesosy mba hanehoany famindrampo amintsika.
Enga anie ka hanomboka ao am-po ny asa! “Fa tsy fanatitra no sitrakao; raha izany dia nomeko ihany; ny fanatitra odorana tsy mahafaly anao. Ny fanatitra ho an’Andriamanitra dia fanahy torotoro; “ny fo torotoro sy mangorakoraka, Andriamanitra ô, tsy mba ataonao tsinontsinona” Sal. 51:16,17. Rehefa izay, dia aoka ho takatry ny mpianakavy rehetra fa tsy maintsy manomboka ao am-po ny asa. Tsy maintsy aetry sy atao mangorakoraka amin’ny alalan’ny herin’ny Fanahy Masina mamorona sy manavao ny fo. Raha tsy takatry ny ray aman-dreny ny fanampiana avy amin’io masoivoho matanjaka io,dia tsy afaka hiasa amin-kafanam-po sy fitiavana bebe kokoa mihoatra noho ny tamin’ny lasa ho amin’ny fiovam-pon’ireo zanany izy ireo ?
Izao no teny fikasan’ny Tompo: “dia hofafazako rano madio hianareo, ka hadio, ny mba ho afaka amin’ny fahalotoanareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no hanadiovako anareo. Ary homeko fo vaovao hianareo, ary fanahy vaovao no hataoko ao anatinareo, ary hesoriko amin’ny nofonareo ny fo vato, ka homeko fo nofo hianareo. Ary ny fanahiko no hataoko ao anatinareo, ka hahatonga anareo handeha araka ny lalàko sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy”. Ezek. 36:25-27
Rehefa miasa eo amin’ny fon’ny ray aman-dreny ny fanahin’ny Tompo, dia hiakatra eo anatrehan’Andriamanitra ny vavaka asandrany sy ny ranomasony, ary raha mitalaho amin-kafanam-po izy, dia handray fahasoavana sy fahendrena avy any an-danitra, ka ho afaka hiasa ho an’ireo zanany tsy mbola niova fo. Rehefa miasa ao an-tonkantrano io Fanahy io, dia entin’ny mpianakavy any am-piangonana izany, ka ireo misionera ao an-tokantrano dia ho tonga irak’Andriamanitra any am-piangonana sy any amin’izao tontolo izao ihany koa.
Hitondra fomba tena hafa tanteraka ireo saha izay napetrak’Andriamanitra.